बिहान ढिलो उठ्ने बानी छ ? ढिलो उठ्नु को फाइदा बेफाईदा दुवै छन् – Sudarshan Khabar
के तपाई बिहान ढिलोसम्म सुत्ने बानी छ ? यदि यस्तो बानी छ भने पनि नआत्तिनुस् ढिलो उठ्नुको बेफाईदा सँगै फाइदा पनि धेरै रहेका छन् ।
बिहान धेरै सुत्दा यस्तो फाईदा
भनिन्छ बिहानले दिनको संकेत देखाउँछ। त्यसैले बिहान राम्रो काम गर्यो भने त्यो दिन निकै उत्तम रहन्छ भनेर शास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ । दिनभरको काम शुभ बनाउन बिहान केही काम अनिवार्य गर्न जुरुरी रहेको शास्त्रमा उल्लेख छ ।
बिहान चाँडै उठ्नु राम्रो बानी हो । हालै गरिएको एक सेर्वेक्षणका अनुसार, दिनको शुरुवात जसरी हुन्छ त्यसले हाम्रो पुरै दिनको लागि स्वास्थ्यलाई पनि प्रभावित गर्छ । यदि शुरुवात राम्रो हुन्छ भने पुरै दिन स्फूर्ति बनी रहन्छ।
अनि कतिपय मान्छे भने बिहान निकै अबेर उठ्ने गर्दछन । घर बाहिर जानु छैन, कामको चटारो छैन , उठेर गर्नुपर्ने केहि काम छैन किन चाडै सुत्नु ? भन्दै ढिलो उठ्ने गर्दछन ।
कतिपयको त दैनिकी नै बनिसक्यो राति अबेर मध्यरातसम्म बस्ने अनि बिहान निकै ढिलो उठ्ने। अचेल मानिसहरु रातभरी फिल्म हेर्ने गर्छन् र बिहान पनि निकै अबेर उठ्ने गर्दछन् ।
अ’चेलको व्य’स्त जीवनशैलीका कारण मानिसहरूले राम्ररी निद्रा पु–याउन पनि पाउँदैनन् । प्रत्येक व्यक्तिका लागि कम्तीमा आठ घन्टाको निद्रा आवश्यक हुन्छ भनेर भनिन्छ। निद्रा पूरा नहुँदा विभिन्न किसिमका रोगहरुले सताउने गर्दछन ।
डि’प्रेसन, टा’इप २ डा’यबिटिज, अ’निद्रा तथा एं’ग्जाइटी जस्ता रो’ग अनिदोको कारण लाग्ने गर्दछन्। अनुसन्धानकर्ताहरूका अनुसार हरेक दिन नियमित आठ घन्टाबाहेक थप २० मिनेट मात्र सु’त्दा पनि ताजा अनुभव गर्न सकिन्छ ।
त्यस्तै एक अध्ययनले बिहान धेरै सुत्ने व्यक्ति डिमेन्सियाबाट पिडित हुने देखाएको छ ।
यो मस्तिष्क रोगबाट गम्भीर रुपमा ग्रसित हुने रोग हो । अध्ययनको अनुसार यदि तपाईंहरु बिहान ढिलासम्म सुत्नुहुन्छ भने तपाईंलाई ५० वर्षभन्दा कम उमेरमा पनि यो रोग लाग्नसक्छ ।
बढी सुत्ने मात्रै होइन, ६ घण्टाभन्दा कम सुत्नेहरुमा पनि यो समस्या देखिन सक्छ।
प्रकाशित भएको : October 21st, 2020